Akasekho umbulali entabeni | Scrolla Izindaba
Akasekho umbulali entabeni
Izinyanga eziyisithupha – phakathi kukaMfumfu kowe-2017 noNhlangulana kowe-2018 – izivakashi, abagibeli bezintaba, abathanda ukukhempa kanye nabaqaphi bezinyoni bebesaba kakhulu ukuya e-Silvermine Nature Reserve e-Table Mountain National Park.
Umalugaju ubeseguqule umzila omuhle wokuhamba izintaba waba yindawo yakhe yokuzingela.
Ngalesi sikhathi uBlessing Bveni wabulala uIan McPherson noDouglas Notten, futhi wenza amacala amaningi okubandakanya ukuzama ukubulala nokuphanga esebenzisa isihluku.
Izisulu zakhe kubalwa abagijimi, abagibeli bezintaba, abagibeli bamabhayisikili, abesifazane nezingane ezimbili.
UMalcolm Eesterheizen, uDavid Bucklow, uMegan Steel noDamian Steel bonke bavakashele imigwaqo emihle ye-Silvermine Reservoir Trails. Kodwa bonke baba nenhlanhla yokubaleka nezimpilo zabo ngemuva kokuhlangana ngodlame nonya noBveni phezulu entabeni.
Kuleli sonto iJaji uJudith Cloete usivale unomphela lesi sahluko esesabekayo ngesikhathi egweba uBveni odilikajele ababili neminyaka engama-33 ebhadle ejele okungenani ngamacala ayi-10 aqoshiwe.
UJustice Cloete uthe: “Abashonile, uNotten noMcPherson, bahlukunyezwe ngonya futhi bahlaselwa uhlanya ngenhloso ecacile yokuqinisekisa ukuthi ngeke basinde.
“Lokhu kusho ukuthi bobabili bashone kabuhlungu.
“Ngaleyo ndlela ubonakala engumuntu ononya nongenazwelo futhi nongakhombisi ukuzisola.”
Umshushisi uAdvocate Chris Burke uthe: “Njengomgijimi nami, ngiyajabula ukuthi ngisizile ekwenzeni i-Table Mountain enhle ibe indawo ephephile ongahlala kuyo futhi ongayijabulela.”
Abaqhaphi bezinyoni epharadesi bama phezu kwentaba i-Kaapse Weg – ne-Tokai, ne-Constantia ne-Westlake ngakolunye uhlangothi, bese kuba i-Noordhoek, ne-Sun Valley kolunye uhlangothi, kwehlela ngasolwandle i-Atlantic.
Ukulimala kwedumela nezindleko kwezokuvakasha ezibangelwe ukubusa kukaBveni e-Table Mountain National Park akunakulinganiswa. Kodwa ukulwela ubulungiswa ngamaphoyisa nabalindi be-SANPark kubuyise ukuphepha entabeni edumile.
Umthombo wesithombe: sa-venues.com